PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-04 - UKHATHAZWA WUMLANDO OMUBI WE-CHIEFS
UKHATHAZWA WUMLANDO OMUBI WE-CHIEFS
Ilanga langeSonto - 2018-11-04 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
UMLANDO ongemuhle wekaizer Chiefs uma idlalela ethekwini wenza ugiovanni Solinas ongumqeqeshi wale kilabhu kungavumi ukuba alale ngokuthula uma ecabanga ngomdlalo omqoka obhekene nezakhe kulo leli dolobha lakwazuluNatal. Ichiefs izobhekana nesupersport United kwi- quarter final ye-telkom Knockout namuhla ngesonto ngo-15h00 emoses Mabhida Stadium, ethekwini.
Ichiefs iya kulo mdlalo nje, izinto kaziyihambeli kahle njengoba imiphumela ingahlangani kahle. Izobhekana nesupersport ebukeka yenza kahle ngaphansi kobuholi bukakaitano Tembo okuyisizini yakhe yokuqala engumqeqeshi ozimele. Usolinas uqwashiswa wumlando wezakhe uma zidlalela emoses Mabhida Stadium. “Okwami ngikwenzile, ngizame ngayo yonke indlela ukulungisa amaphutha esiwenze emdlalweni womkhaya ne-orlando Pirates. Siyitadishile isuperSport, sayibona lapho iyingozi khona. Cishe phambili ishesha njengayo ipirates. Kuzofanele sibambelele kulokhu esikuhlelile ngoba uma sike sakujika sesisenkundleni njengoba senze kwipirates sizokuba sengozini. “Konke kulele kubadlali manje, omningi umsebenzi sengiwenzile. Ithemba lokuthi sizowunqoba lo mdlalo nginalo yize nginovalo nje lokuthi kasivamisile ukuphatheka kahle ethekwini ikakhulukazi emidlalweni yezinkomishi.
"Isupersport lena ike yasimisa kabi khona ethekwini nefree State Stars ngokunjalo. Le nto ingenza ngingalali ngokukhululeka. Kodwa-ke yilona thuba leli lokuguqula lo mlando ongemuhle kule nkundla,” kusho usolinas.
Utembo uthi konke kuhambe ngokohlelo, okumphethe kabi nje wukuthi ngeke abe khona umgadli wakhe omqoka ubradley Grobler obeyonyangwa inyonga.
“Amalungiselelo ahambe kahle, umdlalo sesiwulungele. Okubuhlungu nje wukuthi sizowugijima ngaphandle kwabadlali bethu ababili abangumgogodla wekilabhu udean Furman ophuke ingalo nogrobler obeyolashwa inyonga.
Kodwa-ke kangifuni ukubeka izaba ungakagijinywa umdlalo ngoba sinabo abadlali abazovala izikhala zabo.
“Silindele umdlalo onzima kwiChiefs ethekwini futhi sizokulwa kulo mdlalo. Sizibona sinalo ithuba lokungena kwi- semi final yize sidlala ekuhambeni. Ekuhambeni ngikholwa wukuthi yilapho esinamandla khona lokhu kuzobonakala kulo mdlalo,” kusho utembo.
Emuva kwalo mdlalo kuzoqhathwa amakilabhu ngendlela azogijima ngayo kuma- semi final.